Ii-FAQ | Jiangxi Kulungile Science kunye neTeknoloji Co., Ltd.
Lithini ixesha lokuqinisekisa ngomatshini wakho?
unyaka omnye ukusukela ngomhla wokuthunyelwa. Ngexesha lewaranti, ukuba imveliso inengxaki zomgangatho (phantsi kobume obuqhelekileyo bokusebenza), umthengisi unoxanduva lokutshintsha iindawo ezaphukileyo, kwaye simahla. Ezi meko zilandelayo ngaphakathi kwexesha lewaranti azikho simahla: A. Ukuba iinxalenye zonakele ngenxa yokusebenza ngokungekho mthethweni komthengi okanye imeko yendalo esingqongileyo, umthengi uya kuthenga kwaye abuyisele iinxalenye ezivela kumthengisi kwaye ahlawule iindleko ezihambelanayo; Ukutshintshwa kwezinto ezisetyenziswayo kwithuba lewaranti ayizizo ezesimahla, kwaye izinto zasimahla ezisimahla ezithunyelwe ngomatshini zezamalungu anokusebenziseka.
yeyiphi imodeli kamatshini endifanele ukuyikhetha kuthotho lwemveliso yakho?
Senza iphepha leethishu ukuguqula kunye nokupakisha oomatshini, oomatshini abenzi bemaski abalahlwayo.
Ukuba ufuna umatshini wokuguqula izicubu, nceda unike iphepha lakho le-jumbo, iphepha eligqityiweyo lemveliso yethishu.
Ukuba ufuna umatshini wokupakisha izicubu, nceda unikeze ifom yephakheji yethishu kunye nokucaciswa kwephakheji.
Ukuba ufuna umgca opheleleyo ukusuka kwizicubu eziguqulwayo ukuya ekupakisheni, nceda unikeze ubume bendawo yakho yefektri, iphepha le-jumbo iphepha lesikhombisi, amandla emveliso, ifom yephakheji egqityiweyo, siya kwenza umzobo opheleleyo womgca kubandakanya ukuguqula izicwili kunye nokupakisha umatshini kunye nakho konke ukuhambisa okuyimfuneko inkqubo yolawulo.
Ukuba ufuna oomatshini bokwenza imaski, nceda unikeze imifanekiso yakho yemaski kunye nesicelo.
Siza kucebisa kwaye sinike eyona modeli ifanelekileyo yesiseko somatshini kulwazi olungentla.
yintoni emva kwenkonzo yokuthengisa emva kokuba sifumene oomatshini?
Phantsi kwemeko yesiqhelo, emva kokuba oomatshini befika, umthengi kufuneka aqhagamshele umbane kunye nomoya koomatshini, emva koko abathengisi baya kuthumela uchwepheshe ukuba afake umgca wemveliso. Umthengi uya kubhatala amatikiti abo ohambo asuka e-China ukuya kumzi-mveliso womthengi, intlawulo yevisa, ukutya ukutya nendawo yokuhlala. Kwaye ixesha lokusebenza kweetekhnoloji ziiyure ezingama-8 ngosuku ngemivuzo yemihla ngemihla ye-USD60 / yomntu.
Umthengi uya kubonelela ngomguquli wesiNgesi-waseTshayina oya kuthi anike uncedo kwiingcali
Ngexesha lobhubhane lwehlabathi, uMthengi kufuneka azi ukuba umthengisi akazokwazi ukuthumela injineli kufakelo lomatshini kunye nokugunyazisa. Umphathi wethu wentengiso kunye neinjineli ziya kukukhokela / zikuxhase ngevidiyo / imifanekiso / unxibelelwano ngefowuni. Emva kokuba intsholongwane iphelile kwaye imeko yendalo iphela ikhuselekile, kunye nokuhamba ngenqwelomoya kunye nokungena kwilizwe liphela kunye nomgaqo-nkqubo wokungena uvumela, ukuba umthengi ufuna injineli ukuba ihambele inkxaso, abathengisi baya kuthumela ingcali ukuba ifake umatshini. Kwaye umthengi uya kuhlawula imali ye-visa, amatikiti omoya ajikelezayo ukusuka e-China ukuya kumzi-mveliso ka-buye, ukuthuthwa kokutya kunye nendawo yokuhlala kwisixeko somthengi. Umvuzo wegcisa yi-USD60 / ngosuku / umntu.